E. Coli Infection (E.coli ဝမ်းရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » E. Coli Infection (E.coli ဝမ်းရောဂါပိုးဝင်ခြင်း)
E. Coli Infection (E.coli ဝမ်းရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
E.coli (အီးကိုလိုင်) လို့ခေါ်တဲ့ ဘတ်တီးရီးယား ပိုးဟာ လူနဲ့ တိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့ အူလမ်းကြောင်းမှာ သဘာဝအတိုင်း နေထိုင်နေကြပါတယ်။ E.coli ပိုးအများစုဟာ အပျော့စားဝမ်းလျှောခြင်းကိုသာဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း အချို့သော အမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ E.coliO157:H7 ဆိုတဲ့ ပိုးကတော့ ဆိုးရွားတဲ့ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပိုးဝင်ခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း နှင့် ဖျားနာခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ E.coli ပိုးဝင်ခြင်းဟာ မသန့်သောရေ သို့မဟုတ်အစာ အထူးသဖြင့် အသီးအရွက်များကို အစိမ်းအတိုင်း စားခြင်းနှင့် သေချာကျက်အောင် မချက်ထားသော အမဲသားစတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီး သူတွေကတော့ E.coli O157:H7 ပိုးဝင်လာလျှင် တစ်ပတ်အတွင်း ရောဂါသက်သာသွားလေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော် ကလေးငယ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ခုခံအားစနစ်လျော့ကျနေသူများ နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေမှာ E.coli ပိုးဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးသည် အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့အထိ အန္တရာယ် များလာစေပါတယ်။ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ E.coli ပိုးဝင်ခြင်း ကိစ္စအများစုဟာ အိမ်မှာပဲ ကုသမှု ခံယူနိုင်ပါတယ်။
E. Coli Infection (E.coli ဝမ်းရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
E. Coli Infection (E.coli ဝမ်းရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
E.coli ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ ရုတ်တရက် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေကဲ့သို့ ဝမ်းအရည်ကျဲများသွားခြင်း၊ထိုမှ တစ်ဆင့် သွေးပါသောဝမ်းများ သွားတဲ့ အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်ကို ဆွဲညှစ်ထားသလို နာကျင်ခြင်း၊ ဗိုက်ရစ်နာခြင်း၊ ပျို့ခြင်းနှင့် အန်ခြင်း ၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း ၊ ပင်ပန်းနုံးချိနေခြင်း၊ ဖျားခြင်း စတဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
E.coli ပိုးဝင်တဲ့အခါ အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
•	ဆီးသွားသည့်အခါ သွေးပါခြင်း၊
•	အသားအရည် ဖြူဖျော့လာခြင်း ၊
•	သွေးခြည်ဥကွက်များ ပေါ်လာခြင်း၊
•	ရေဓာတ်ချို့တဲ့လာခြင်းစတဲ့ လက္ခဏာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝမ်းလျှောခြင်းဟာ လူကြီးတွေမှာ ၄ရက်ထက်ကျော်လာပြီး မသက်သာတဲ့အခါ / မွေးကင်းစကလေး သို့မဟုတ် ကလေးကြီးတွေမှာ ၂ရက်ကျော်လာတဲ့ အထိ ဝမ်းလျှောခြင်းမသက်သာတဲ့အခါ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပါတယ်။
•	ဝမ်းလျှောခြင်းဟာဖျားခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေခြင်း၊
•	ဝမ်းသွားပြီးချိန်တောင်မှ ဆက်၍ဗိုက်နာနေခြင်း၊
•	သင့်ရဲ့ဝမ်းတွင် ပြည်သို့မဟုတ်သွေးများပါလာခြင်း၊
•	၁၂ နာရီထက် ပို၍ အန်ခြင်း၊
•	နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခု သို့လတ်တလောအလည်သွားထား ပြီးအူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်သည့် ရောဂါလက္ခဏာများ ခံစားရခြင်း၊
•	ရေဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ဆီးသွားနည်းလာခြင်း၊ အလွန်အမင်း ရေငတ်ခြင်းနှင့် မူးဝေနုံးချိခြင်း
စတဲ့လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာရင်လည်း သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။
E. Coli Infection (E.coli ဝမ်းရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) ကို ဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
E.coli ဝမ်းရောဂါပိုး ဝင်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့ကတော့ မသန့်ရှင်းသော အစားအသောက်များကို စားသောက်မိခြင်းက အဓိကပြဿနာ အကြောင်းအရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အစားအစာ ပြင်ဆင်တဲ့အခါ သန့်ရှင်းမှု မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် အစားအသောက်များဟာ ရောဂါပိုးဝင်ရောက် ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
•	အစားအစာမပြင်ဆင်ခင် သို့မဟုတ် အစာမစားခင်မှာ လက်မဆေးခြင်း သို့မဟုတ် လက်ကိုဆပ်ပြာနဲ့ သေချာစွာမဆေးခြင်း၊
•	မသန့်ရှင်းသော ပန်းကန်ခွက်ယောက်များ၊ စဉ်းနှီတုံးများ သို့မဟုတ် အစားအသောက်ခင်းကျင်းသည့် ပန်းကန်ခွက်ယောက်များကို အသုံးပြုခြင်း၊
•	အစားအစာ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသောနေရာ၌ အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ မသင့်တင့်သောကြောင့် မသန့်မရှင်းဖြစ်နေသော အစာများစားမိခြင်း၊
•	မမှည့်သော အသီးအနှံအစိမ်းများစားသောက်ခြင်း၊ ပင်လယ်စာထွက်ကုန်များကို အစိမ်း စားသောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြား ထွက်ကုန်များကို သေချာစွာ မဆေးကြောဘဲ စားသောက်ခြင်း၊
•	ပိုးသတ်မထားသော နို့ကိုသောက်မိခြင်း၊ သားသတ်ရာ၌ လုပ်ပုံကိုင်ပုံစနစ်များ မသန့်ရှင်းခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များ၏ အူလမ်းကြောင်းမှ ဘက်တီးရီးယား ပိုးများ၊ ကြက်၊ ငှက်နှင့် အသားများတွင် ပါလာခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ မသန့်ရှင်းသောရေကို သောက်မိခြင်း သို့မဟုတ် မသန့်ရှင်းသောရေကူးကန်တွင် ရေချိုးခြင်း၊ လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးကူးစက်ခြင်း။ ရောဂါပိုးရှိနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ လက်ကိုသေချာမဆေးဘဲ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ထိမိမယ် သို့မဟုတ် အစားအစာ ကဲ့သို့ တစ်စုံတစ်ခုကို ကိုင်တွယ်မိမယ်ဆိုရင် ဘက်တီးရီးယားပိုးဟာ အလွယ်တကူ ပျံ့ နှံ့ နိုင်ပါတယ်။တိရိစ္ဆာန်များမှ တစ်ဆင့် ကူးစက်ခြင်း။ တိရိစ္ဆာန်များနှင့် အနီးကပ်နေ၍လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ (အထူးသဖြင့် နွားများ၊ ဆိတ်များနှင့် သိုးများ) ဟာ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့  ခန္ဓာကိုယ်မှာနေထိုင်နေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုး တွေကြောင့် ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံနေရပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ E. Coli Infection (E.coli ဝမ်းရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
E.coli ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အသက်အရွယ်: ကလေးငယ်များနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများဟာ အခြားအသက်အရွယ်များထက်စာလျှင် E.coli ပိုး ပိုပြီးကူးစက်နိုင် ခြေများပါတယ်။
AIDS ရောဂါ ရှိသူများ သို့မဟုတ် ကင်ဆာရောဂါဆေးသောက်နေရသူများ သို့မဟုတ် ကလီစာအစားထိုးထားသောကြောင့် ကိုယ်ခံအားကျစေရန် ဆေးသောက်နေရသူများ စတဲ့လူတွေမှာလည်း ခုခံအားစနစ် အားနည်းနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
အချို့သောအစားအစာများကို စားသုံးခြင်း ဥပမာ သေချာစွာ ချက်ပြုတ်မထားသော ဟန်ဘာဂါ၊ ပိုးသတ်မထားသော နို့၊ ပန်းသီးဖျော်ရည် သို့မဟုတ် ပန်းသီးအရက် သို့မဟုတ် နို့စိမ်းမှ ပြုလုပ်ထားသော ဒိန်ခဲအပျော့များ စတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားမိခြင်းကလည်း ရောဂါပိုး ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဇွန်လမှ စက်တင်ဘာလ တောက်လျှောက်ဟာ E.coli ပိုးကူစက်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံး လတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အစာအိမ် အက်ဆစ်အထွက် နည်းအောင် သောက်သော ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ Esomeprazole (Nexium)၊ pantoprazole (Protonix)၊ lansoprazole (Prevacid) တို့ဟာလည်း အစာအိမ်အက်ဆစ် ပမာဏ လျော့နည်းစေ တဲ့အတွက် ရောဂါပိုးဝင်နိုင်ပါတယ်။
E. Coli Infection (E.coli ဝမ်းရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
E.coli ရောဂါပိုးရှိမရှိကို အဖြေရှာအတည်ပြုရန် ၎င်းဘက်တီးရီးယားပိုးကို ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်၍ သိနိုင်ပါတယ်။
E. Coli Infection (E.coli ဝမ်းရောဂါပိုးဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
E.coli ရောဂါပိုးကို ကုသတဲ့ ကိစ္စအများစုမှာ အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
•	ကောင်းကောင်း အနားယူပါ။
•	ရေဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့် မူးဝေနုံးချိခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ရေများများသောက်ပါ။ အချို့သောအခြေအနေတွေမှာ ဆေးရုံတက်ပြီး သွေးပြန်ကြောမှတစ်ဆင့် လိုအပ်သော အရည်များ ဖြည့်သွင်းကုသခြင်းက လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
•	ဝမ်းလျှောသက်သာစေသော ဆေးများသောက်ပါ။ ဝမ်းလျှောခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ဆေးမသောက်ခင်မှာ ဆရာဝန်က သင့်ကို စမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။
E.coli infection. http://www.healthline.com/health/e-coli- infection. Accessed July 9, 2016.
E.coli infection. http://www.webmd.com/a-to- z-guides/e- coli-infection- topic-overview. Accessed July 9, 2016.
E.coli infection. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/e- coli/basics/definition/con-20032105.Accessed July 9, 2016.E.coli infection. http://www.healthline.com/health/e-coli- infection. Accessed July 9, 2016.
E.coli infection. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/e- coli/basics/definition/con-20032105.Accessed July 9, 2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုငျ 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုငျ 11, 2017
နေရာလွဲမှား သန္ဓေတည်ခြင်း (ectopic pregnancy) နဲ့ ပတ်သက်လို့ သိထားသင့်သည်များ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကို အိပ်ရာထဲမှာပဲ ဘာ့ကြောင့်နားနေခိုင်းတာလဲ
အမျိုးသမီး လစဉ်သုံးပစ္စည်း Tampon မှားယွင်းသုံးစွဲမှုအန္တရာယ်